Washinggbọ ala Gungba Egbe, Polisher Car, Auto Sun Umbrella - Sebter
Rich ụlọ ọrụ ahụmahụ
Anyị nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ ahụ.
Ike mmepe mmepe
Anyị nwere ihe karịrị 80 patent asambodo.
Complete factory usoro
Na 2020, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwetara asambodo TUV.
Ndị ọrụ ọrụ ọkachamara
Ezigbo mmata ọrụ na njikwa njikwa ọkachamara na-achọpụta na ndị ahịa tụkwasịrị ngwaahịa ahụ obi.
Nchekwa onwe na-ebugharị wiil 1098-3P
Umbrella na windo windo emebi 7902
Anti-static keychain static eliminere, sọrọ-co ...
Static eliminator Anti-static ụgbọ ala static osisi ...
Ego pụrụ iche
Igwe anaghị agba nchara Taya Pressure nlele
Rich ụlọ ọrụ ahụmahụ iji hụ ngwaahịa mma.
Nnyocha ngwaahịa siri ike
Super ike ngwaahịa nnyocha na mmepe ike na-enyere ndị ahịa ịzụlite dị iche iche ọhụrụ na ngwaahịa.
Cheb'obi ndị ahịa
Lezienụ anya na nchedo nke ahịa 'ngwaahịa, na adịghị igosipụta ahịa' patented ngwaahịa.
Nye haziri ahazi
Nwere ike inye ndị ahịa ọtụtụ ngwọta ngwaahịa maka ngwa ahịa ụgbọ ala.
Mere ka nnyocha na mmepe nke akpakanamde ngwa
Ma OEM & ODM na-anabata
Uche mgbe-sales ọrụ iji hụ na a ọma ngwaahịa ahụmahụ
Abali 07, 2021
2020 auto na-enye ụlọ ọrụ atụmanya ahịa na nyocha ọnọdụ ugbu a
Otlọ ndị na-arụ ọrụ na-agụnye usoro ndị a: usoro ihe eji arụ ọrụ, usoro ihe enyemaka inyeaka, usoro ihe nche ụzọ, usoro mkpuchi ụlọ, usoro ụlọ, oche oche, usoro nchekwa kọlụm, usoro ndị ọzọ kwesịrị ekwesị, ụlọ ikuku ...
Companylọ ọrụ anyị etinyela aka na nyocha na mmepụta nke ngwaahịa ịchọ mma ụgbọ ala na ngwaahịa ahụike na gburugburu ebe obibi. Anyị onwe anyị na-eji ngwaahịa nke aka anyị, ka anyị nwee ike melite ma melite n'ọdịnihu. Ihu ihu ihu ...
Ihe ngosi 2021 nke 11 Shanghai International Automobile Products Exhibition (APE)
A ga-eme 2021 11 Shanghai International Automobile Products Exhibition (APE) na Shanghai International Expo Center site na June 27th ruo 29th, 2021. China Shanghai International Automobile Interiors and Exter Exhibition (CIAIE) has been ...